ओलीको जिद्धीले कहाँ पुगिएला भोलि ? ओलीको जिद्धीले कहाँ पुगिएला भोलि ?
ओलीको जिद्धीले कहाँ पुगिएला भोलि ?
भुवन कार्की यतिबेला विश्व नै कोडिड १९ ९ कोरना भाईरस संक्रमणको त्रासमा छ । कोरनाको कारण विश्वभरमा पौने दुई लाख मानिसको मृत्यु भइसको छ भने २५ लाख भन्दा बढी मानिस संक्रमित छन् । आणविक हतियारसहितका कैयौं शक्तिशाली राष्ट्रहरु अहिले लकडाउनको अवस्थामा छन् । नेपाल पनि कोरनाको उच्च जोखिममा छ । लकडाउनका कारण नेपालमा धेरै मजदुरहरु प्रभावित भएका छन् । विदेशमा हुनेहरु नेपाल आउने ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर वातावरण प्रतिकुल अवस्थामा छ । अहिले राहात र उद्दारमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ । यसैबेला नेपालमा नयाँ रानजीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नयाँ दल दर्ता र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेशपछि नेपालको राजनीतिमा फरक तरंग छाएको छ । पार्टीमा सानातीना मदभेद भइराख्छन् । जिवन्त पार्टीमा बहस, छलफल भइरहने विषय नौलो होइन । सरकार संचालन र केही निर्णयहरुमा नेकपाभित्र केही बिवादहरु थिए । यद्देपी ती बिवादहरु छलफलबाट समाधान हुँदै जान सक्थे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संचालनमा अप्ठेरो हुने त्रासले पार्टीमा छलफलबिना नै अध्यादेश ल्याए । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्याएर पार्टी फुटाउन सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संसोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याए हुने खुकुलो प्रावधानका लागि ओलीले यो अध्यादेश ल्याए । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले समेत चाल नपाई एक्कासी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फूटाउन खोजिएको भन्दै यसको चौतर्फी बिरोध भएको छ । देशमा कोरना कहरको बेला बेमैसमी बाजा बजाएको भनेर सबैभन्दा बढी बिरोध पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्ताले गरेका छन् ।
किन अत्तालिए ओली ? नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छंदाछंदै प्रधानमन्त्री ओली किन अत्तालिएर बिनाछलफल अध्यादेश ल्याए भन्ने कौतुहलता धेरैमा जागेको छ । यो खेल मुख्यत ओलीको सत्ता जोगाउने खेलनै हो, जहाँ आफ्नै पार्टीका नेताको त्रासले । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्दा ओली पछिल्लो समय एक्लिदै गएका थिए । विश्वसपात्रहरुले विस्तारै उनको साथ छोड्दै गएपछि उनी सत्ताच्युत नै हुँनुपर्छ कि भन्ने त्रासका कारण यो अध्यादेश ल्याएका हुन् । सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्था आए पार्टी नै फूटाएर भएपनि आफू टिक्ने रणनीति अनुरुप उनले ल्याएको नयाँ दल सम्बन्धी अध्यादेशले पार्टीमा चरम अन्तरबिरोध उत्पन्न भएको छ । पार्टीकै जिम्मेवार नेताहरुले यसको बिरोध गरेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले यसमा असहमति जनाएका छन् । भिम रावलले अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् । रामकुमारी झाँक्रीले दुस्वप्न भनेकी छन् । जनार्दन शर्माले आफै दुईतिहाईबाट किन आत्तिएको भनेका छन् । बिपक्ष दलका नेता सबैले यसलाई बेमैसमी बाजा र बासुरीको शंज्ञा दिएका छन् ।
किन एक्लिदै गए ओली ? साविक एमाले र माओवादीको एकताका बेला निकै उत्साहित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको दम्भ बिस्तारै बढाउँदै लगे । अब नेपालमा कसैले हल्लाउन नसक्ने पार्टी र सरकार बनायौं भन्ने घमण्ड ओलीमा देखियो । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा आफ्नै जबरजस्तीपन देखाए । जसका कारण उत्तिकै आलोचित पनि भए । भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने शंकल्प लिएको ओली सरकार भ्रष्टाचारकै घटनाक्रमले बढी आलोचित भयो । तुलो जोखाईमा देशका सबै शक्ति एकातिर अनि सरकारका प्रवक्ता एकतिर हुँदा पनि जित्न सकिने प्रवचन दिएर नेता गोकुल बास्कोटाको प्रशंसा गरे । आखिर आफ्नै सन्तानसरी माया र आर्शिवादमा राखेका बास्कोटालाई भ्रष्टाचार अभियोग लागेर जिम्मेवारीमुक्त गर्नुपर्दा उनलाई ठूलो झड्का लाग्यो । त्यतीमात्र होइन बालुवाटर प्रकरण, यति काण्ड, ओम्नी प्रकरण जस्ता कारणले सरकार आलोचित बन्न पुग्यो । सरकारको आलोचना बढेसंगै पार्टीका नेताबीचमा गुटउपगुटले प्रश्रय पाए । प्रधानमन्त्री ओलीका धेरै निणर्यहरु एकलौटी बलजफ्तीमा भएका थिए, जसका कारण अन्य नेताहरुको असन्तुष्टि बढ्दै गयो र अहिले ओलीले सत्ताच्युत समेत हुँनुपर्ने जोखिम देखेर नयाँ कदम चाले ।
यसकारण टकराव प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसंग निकै घनिष्टता देखाए । तर सकार संचालनका बेला प्रचण्डका धेरै चाहनाहरुलाई तुहाईदिए । पूर्व एमालेकै प्रमुख नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई पनि टाढा बनाए । नेता नेपालसंग त पानी बाराबार नै भयो । यतिसम्म कि स्वास्थ्य उपचारको लागि सिंगापुर जान लाग्दा नेपालले दिएको स्वस्थ्य लाभको कामना समेत स्वीकार गरेनन् । नेपाललाई उल्टै जवाफ फर्काएर बरु मृत्युको कामना गर्नुस् भने । अर्कातिर नयाँ सभामुख चयनका बेला भाँजो हाल्न खोजे । प्रचण्डको चाहनाबिपरित विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बामदेवलाई ल्याउने कुरा, चीनका लागि नेपाली राजदुत लिलामणी पौडेललाई फिर्ता बोलाउने कुरा, पछिल्लो समय कोरना कहरको बेला प्रचण्डले ल्याएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा, आदि विषयमा ओली निर्मम देखिए । प्रचण्डको आग्रह लत्याईदिए । प्रचण्डको प्रस्तावहरुलाई ‘कुण्ठा’ र ‘हुटिट्याउ’को संज्ञा दिए । अन्ततः दुई अध्यक्षको दुरी बढ्यो र ओलीले त्रसित मानसिकता बोकर अध्यादेश ल्याए ।
अब के होला ? हुनत केपी ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा सत्ता टिकाईराख्न बिभिन्न अश्त्र प्रयोग गरे जसरी बहुआयामिक अश्त्रको रुपमा यी दुई अध्यादेश लिएका छन् । तर घटनाक्रम हेर्दा पार्टीगत घैंटो चर्किसकेको अनुभूति हुँदैछ । जेहोस् यसलाई अहिले नै फुट्न दिइनु हुँदैन । भरसक अहिलेलाई टालटुल पार्नुपर्छ किनकि यो कोरनासंग लड्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समय हो । कुनै पनि पार्टी फूट्नु देशको लागि राम्रो कुरा होइन । यद्देपी चरम विवादहरु सृजना भइरहेकाले पार्टी जुट्ने भन्दा फुट्ने खतरा बढी देखिएको छ । प्रतिपक्ष कमजोर भएको बेला आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन नसके ओलीको राजनीतिक भविश्य संकटमा पर्ने देखिन्छ । ओलीको यो जिद्धीले नेकपाको राजनीतिक भविश्यनै अन्यौलमा पारिदिएको छ । भोलि काहाँ पुगिएला भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो भएको छ । कतै फेरि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बिउ जम्मा पार्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन रु यो खतरा पनि छ । यो बेला प्रचण्डले पनि संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । पार्टीभित्र चरम विवादहरु भएपनि अहिलेलाई थाँती राख्नुको विकल्प छैन । हामीले पहिले कोरनासंग लड्नुछ । आन्तरिक बहस, छलफल र निष्कर्ष पछिपनि निकाल्न सकिन्छ । अहिले पार्टी र जनता दुबै जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेकपाका प्रमुख नेताको काँधमा छ । सबै मिलेर बिपत्तिको समाना गरौं । त्यसपछि नयाँ गन्तब्यहरुका बारेमा पनि बिचार गरौंला ।